Biodigesters na obodo ndi Argentina | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Biodigesters na ime obodo Argentina
Adrian | | Biogas, Ike imeghari ohuru
La Argentina Ọ bụ otu n'ime mba nwere ndọtị kachasị na mmepe akụ na ụba n'ọhịa.
Mana dịka ọ dị n'ọtụtụ mba, ịnwe nnukwu mpaghara dịpụrụ adịpụ nke dịpụrụ adịpụ site na mpaghara obodo mepere emepe, anaghị arụkarị ọrụ ndị bụ isi dịka ọrụ ndị bụ isi ma ọ bụ ezughi oke. ìhè, gas, ọkụ eletrik na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
N'ịbụ nke ọnọdụ a chere ihu, ruo iri afọ ole na ole ugbu a, ọ malitela iji ya ndị na-elekọta ihe n’ime ime obodo ndị a. Ojiji nke teknụzụ a dị mfe ma dị irè na-eto eto nke ukwuu.
A na-eme atụmatụ na n'ime Argentina niile, e nwere ihe karịrị 50 biodigesters kesara na mmiri ara ehi, ugbo ezì, ubi ehi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akọ ugbo.
Ihe kpatara ojiji biodigesters ji na-abawanye ngwa ngwa ma na-amụba bụ n'ihi nnukwu uru nke teknụzụ a, nke na-enye ohere ịmịpụta gas ikpo, n'ịwa ọkụ eletrik maka oriri ezinụlọ na ịkọkọ mkpa a na-arụ n'ọrụ ugbo yana maka ịmịpụta mmiri nfuli mmiri ọ drinkingụ andụ ma werekwa ya na fatịlaịza.
Ọrụ ahụ dị mfe ma ọ dị nfe n'ihi oke akụrụngwa ndị ụlọ ọrụ ndị a na-emepụta dị ka nri, ihe ubi, wdg.
Gwọ ahụ adịghị elu ya mere na ọ bụ nhọrọ bara uru na akụnụba na gburugburu ebe obibi.
Ebe ọ bụ na ego nke n'efu na-budata belata, na umu anwuru nke carbon dioxide y methane Enwere ike iji ihe ọkụkụ na-emepụta nke ụmụ anụmanụ na fatịlaịza sitere n'okike maka ihe ọkụkụ. Na mgbakwunye na ịdabere na sistemụ ọrụ ọha na eze dị ụkọ ma ọ bụ na-adịghị adị na mpaghara ụfọdụ ma na-eme ka ọrụ akụ na ụba sie ike.
Usoro ndị a na-ukwuu mepụtara n'ime ime obodo nke Germany na Brazil n'ihi uru ha nwere na uru ọ na-eweta, dị ka ọkụ eletrik, ihe omimi na fatịlaịza dị ọnụ ala, nke na-enye anyị ohere ịsọ mpi n’ọrụ ugbo.
Na Argentina omume nke iji biodigesters ga-anọgide na-agbasa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ihe ọkụkụ » Biogas » Biodigesters na ime obodo Argentina
Igwe igwe eletrik maka ndị agadi
Lithium zuru ụwa ọnụ dị na ụwa